NDAROVERA HOKO: CHIPEZEZE | Kwayedza
NDAROVERA HOKO: CHIPEZEZE
13 Sep, 2019 - 00:09	 2019-09-12T12:03:52+00:00 2019-09-13T00:05:47+00:00 0 Views
MUBATI wepagedhi weWarriors Elvis Chipezeze anoti atoroverera hoko pagedhi uye acharwa semvumba kuti arambe achibatira chikwata chenyika ichi.
Chipezeze nguva yadarika akapomerwa mhosva nevatsigiri venhabvu vachiti ndiye akadyisa maWarriors apo akazvamburwa 4 – 0 neDemocratic Republic of Congo kumakwishu eAfrcia Cup of Nations (Afcon) ayo akaitirwa kuEgypt.
Asi murairidzi wemaWarriors mutsva, Joey Antipas, akamupa mumwe mukana ndokumushevedza kuzotambira chikwata chenyika murwendo rwekurwira kuenda kuQatar 2022 World Cup.
Muhurukuro neKwayedza kunhandare yeNational Sports Stadium nemusi weChipiri chino apo maWarriors ange achangobva kukunda Somalia 3-1, Chipezeze anoti akambobatikana zvikuru nezvakataurwa nevanhu nekuda kwemutambo weAfcon asi akaramba achishanda nesimba.
“Zvakawanda zvakataurwa asi ndakawana rutsigiro kubva kuvanhu vakawanda nemurairidzi wangu uye mhuri yangu. Zvinowanikwa munhabvu asi chikuru kuramba ndichingoshanda nesimba chete,” anodaro.
Mutambi uyu – uyo anotambira Baroka FC yekuSouth Africa – anoti chivimbo china Antipas maari anochikoshesa zvikuru.
“Rutsigiro rwandapihwa nemurairidzi runondikoshera zvikuru saka ini ndinofanirwa kuramba ndichishanda nesimba chete.
“Kundigadza kwaaita kuve mubati wemaWarriors kunorakidza kuti anovimba neni saka iniwo ndicharwa semvumba uye ndichishanda nesimba kuti ndirambe ndiri mubati wemaWarriors,” anodaro Chipezeze.
MaWarriors akabudirira kupinda mumapoka (group stages) ekurwira kuenda kuQatar 2022 World zvichitevera kuhwina kwaakaita 3 -1 nemusi weChipiri chino.
Vatambi vanoti Marshall Munetsi, Knowx Mutizwa naKhama Billiat ndivo vakanwisa.
Mumutambo wekutanga wakatambirwa kuDjibouti svondo radarika, maWarriors akakundwa neSomalia 1 – 0.
‘TSIGIRAI LOGA’21 Feb, 2020
‘Ndamirira Ambunda’21 Feb, 2020
Bhora mutambo21 Feb, 2020